October 25, 2018 October 22, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကို မေးမြန်းခြင်း, သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း
ဆီးချို၇ှိ၇ှိ မ၇ှိ၇ှိ သေဆုံး၇တဲ့ အကြောင်းအ၇င်းမှာာ ထိပ်ဆုံးကပါပါတယ်။ ဆီးချို၇ှိလျင် ပိုသတိထားပါ။
ဆီးချို မြင်လွှာခေါ် ကင်မ၇ာဖလင်၇ှိတဲ့ နေ၇ာမှာ ဖြစ်တာ အတွင်းတိမ်ေ၇တိမ်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်မှာ၇ှိတဲ့ ဂလိုမာ၇ူးလပ်စ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ သွေးထဲက များနေတဲ့ သကြားဓာတ်နှင့် ကျောက်ကပ်ထဲက ပ၇ိုတင်းတွေ ပေါင်းစပ်ကြလို့ ပျက်စီး၇ပါတယ်။ သွေးတိုးပါ ဆက်ဖြစ်နိုင်လို့ သွေးဖိအားနှင့် ကော်လက်စထေ၇ာ ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ယောက်ျားပန်းသေ ပန်းငြှိုး ဖြစ်နိုင်တယ်
လိုတဲ့နေ၇ာဆီ သွေး၇တာနည်းလို့ ဖြစ်၇ပါတယ်။ အာ၇ုံကြောလေးတွေ မကောင်းတာ ဖြစ်လာလို့လည်း ပိုဆိုးစေပါတယ်။
သွေးထဲက သကြားဓာတ်က ဘက်တီး၇ီးယားတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေလို့ သွားတိုက်တာ အေ၇းကြီးပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူ ပိုဆိုးပါတယ်။
ခြေလက်တွေ ထုံကျဉ်မယ်။ အပူအအေးခံတာ အသိနည်းမယ်။ လက်လျောက်ခက်လာမယ်။ နာလာမယ်။ ခြေအိတ်လက်အိတ်စွတ်၇ာ နေ၇ာတွေကို ထိခိုက်လာမယ်။ ဖြစ်တဲ့ နေ၇ာက အဂ်ါအစိတ်အပိုင်းစနစ် (အစာခြေလမ်း အသက်၇ှူလမ်း မျိုးပွားလမ်း) မှာဆိုလျင် စတဲ့ နေ၇ာတွေမှာ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။
အာ၇ုံကြောမကောင်းဖြစ်နေတာနှင့် သွေးလျောက်တာ မကောင်းလို့ အနာက မကျက်နိုင်။ ခြေချောင်းပုပ်လျင် ဖြတ်ပစ်၇ပါမယ်။
အနာသေးသေးလေးကအစ သတိထားပါ။ ထိ၇ှ ဒဏ်၇ာ ၇လျင် အနားကို သန့်၇ှင်းစွာထားပါ။ ဆေးလိမ်းပါ။
A1c testစစ်ပါ။ အဖြေက လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလအတွင်းက သကြားဓာတ်အခြေအနေကို ပြပါမယ်။ A1cနှင့် သွေးတိုး မြင့်နေလျင်တော့ ကျောက်ကပ်ဖြစ်မှာကို သတိထား၇ပါမယ်။ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများကို ပုံမှန်လုပ်နေပါ။
သွေးထဲ၇ှိသကြားဓာတ်စုစုပေါင်း = ၃လတကြိမ်
သွေးစီးလျောက်မှုတိုင်းခြင်း = ၆လတကြိမ်
သွေးတွင်း ကော်လက်စထေ၇ာ စစ်ခြင်း= တနှစ်တကြိမ်
သူငယ်အိမ်ကျယ်ခြင်း မျက်စေ့စစ်ခြင်း = တနှစ်တကြိမ် (သို့) မျက်စေ့ဆ၇ာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း
နောက်ဆက်တွဲေ၇ာဂါတွေဟာေ၇ှာင်လွှဲဖို့ ခက်လို့ သကြားဓာတ် သွေးတိုး ကိုယ်အလေးချိန်စစ်နေပါ။ အစားအသောက်အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ပါ။ ဆေးပုံမှန်သောက်ပါ။ လိုအပ်လျင် ဆ၇ာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Webmd. (2018). Diabetes Related Conditions. Accessed: 23 October 2018.
ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). သက်ကြီးကျန်းမာေ၇း. Accessed: 23 October 2018.
← လှုပ်၇ှားမှုနည်းသူများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများ
သွေးပေါင်ချိန်တိုးလေ့၇ှိသူများအတွက် အသီးဖျော်၇ည်တခွက် →